Lego Star Wars Boba Fett အစုံသည်ကုန်ပစ္စည်းသတင်းများ၌ပါ ၀ င်နိုင်သည်
12 / 10 / 2021 13 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 220 Views စာ0မှတ်ချက် 75307 Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန်, 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75315 Imperial အလင်း Cruiser, 75319 The Armorer's Mandalorian Forge, လက်ဆောင်ကိုအိမ်ပြန်ယူပါ, Lego, Lego Star Wars, mandalorian, မန်ဒိုတနင်္လာနေ့, Star Wars, Star Wars: Boba Fett ၏စာအုပ်, Star Warsဖြေ, Boba Fett ၏စာအုပ်, အဆိုပါ Mandalorian
Boba Fett ၏စာအုပ်သည်မကြာမီလာမည်ဖြစ်သောကြောင့် Star Wars အဖွဲ့သည်အပတ်စဉ်အပါအ ၀ င်ကုန်ပစ္စည်းများပြသရန်အစီအစဉ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Lego အစုံ။
အောက်ပါ မန်ဒိုတနင်္လာနေ့ ၂၀၂၀ တွင် The Mandalorian ကိုဖြန့်ချိရန်အတူပါ ၀ င်သောပထမအပတ်ကိုကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည် Lego မော်ဒယ်များ။ လက်ဆောင်ကိုအိမ်ပြန်ယူပါ ၎င်းသည်တိုက်ဆိုင်ရန်စီစဉ်နိုင်သည့်နာမည်ဖြစ်သည် ပစ်လွှတ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ တွင် Boba Fett ၏စာအုပ်မှ
ရက်သတ္တပတ် ၁၂ ပတ်ရှိလိမ့်မည် Star Wars လက်ဆောင်ပေးရန် Bring Home the Bounty မှဖော်ပြသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ တွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သော Stormtrooper ဦး ထုပ်ကိုပထမဆုံးပြသပြီး Boba Fett ၏အထင်ကရ ဦး ထုပ်ကိုပြသည်။
ပထမအပတ်သည် Mandalorian ကိုအာရုံစိုက်ပြီးငါးချက်ပါဝင်သည် Lego စီးရီးအတွက်အကြောင်းအရာအစုံ ဒါတွေပါဝင်ပါတယ် 75315 Imperial အလင်း Cruiser, 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75319 The Armorer's Mandalorian Forge, 75307 Lego Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန် 2021.
ဤရောင်းကုန်သစ်သည် Mando တနင်္လာနေ့များနှင့်ဆင်တူသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး သည်ကောလာဟလများကိုမြင်နိုင်သည် Lego Star Wars Boba Fett ၏စာအုပ်များသည်ပြပွဲမတိုင်မီထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ တစ် ဦး ကို အခြေခံ၍ အစီရင်ခံသည် Bounty Hunter ရဲ့ Jabba the Hutt နန်းတော် နှင့်အခြားရှိသည် အသေးစိတ် ပေါ်ထွက်လာသည်။
Lego Star Wars လည်းဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်တယ် လာမယ့်နှစ်မှာ 18+ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်သုံးကားလက်ခံပြီးရုပ်ရှင်တွေထဲကမြင်ကွင်းတွေကိုပြန်ဖန်တီးတယ်။ ယင်းတို့တွင်ပါဝင်နိုင်သည် Death Star အမှိုက်ကြိတ်စက်, trench ပြေးသည် နှင့် Yoda ၏ Dagobah တွင်လေ့ကျင့်မှု.
← Lego ကောလာဟလ Marvel Wolverine minifigure အသေးစိတ်
LEGO ၏ဝါသနာရှင်ဒီဇိုင်နာကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် Ideas ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster →